1 2 3 4 5 6 ... 4481 Enda pasi
0 Nhengo uye 21 Vashanyi vari kuona nyaya yacho.
« Reply #22: Musi waFebruary 11, 2008, 02:02:20 am »
Chokwadi unorevei changamire a_ysche tinokugamuchirai nemiwo vadikani
« Reply #23: Musi waFebruary 11, 2008, 02:05:47 am »
Yakatorwa kubva ku: sinemm - Kukadzi 11, 2008 pa02: 00: 30 am
Handisi kuzorara manheru ndisina kunyora message iyi.
Kwete, ini handisi James bond ...
Ndiri Esma 41 Bond um, 007 pachinzvimbo che41 ....
Mein Mazita ist esma ... esma 41 bond ...
Huya, adios munhu wese ...
« Reply #24: Musi waFebruary 11, 2008, 02:08:30 am »
« Reply #25: Musi waFebruary 11, 2008, 02:08:32 am »
bye Ndiri kurarawo tschüß
« Reply #26: Musi waFebruary 11, 2008, 11:11:41 am »
« Reply #27: Kukadzi 11, 2008, 03:56:42 pm »
Ko kana tikakwanisa kudzidza chiGerman zvizere kana isu tichinzwisisa hunyanzvi hwese hwemutauro wechiGerman pane ino saiti? kana bidet ini handisi kuwana mazita echiito cheGerman uye chero chinhu munzvimbo ipi neipi. Ndatenda zvikuru kana iwe ukabatsira chigaro kuva nhengo yesaiti kwemazuva maviri. Ndichafara chaizvo kana ukatumira mazita echiGerman echiito uye zvinhu seemail kune yangu msn ###@hotmail.com kero.Ndinoshamisika kana ndichigona kuzvipa zvingangokunetsa iwe asi ndiri kumirira maCV ako
« Reply #28: Kukadzi 11, 2008, 04:21:07 pm »
Ini handibvumirane nebhokisi remarara rinonakidza, asi nepfungwa yeimba yepamusoro apo matinji akasara kumashure. Asi kana chimwe chinhu chakanaka chikataurwa pano, inenge iri hurukuro kwete kusava nechinhu. huya zvirinyore manje ..
"Kana uchizotaura nezvazvo, taura saizvozvo kuti ndigozvitenda,"
Kana muchizondichemedza chemai kuti ndisanyarare
Kana iwe uchizoenda, ini ndichakanganwa nezverufu,
Asi kana iwe uchida kutumira kwakadaro,
Musoro $ sanda & Aglatsanda & Paunoenda, rega ndikuise mumoyo mangu ....
« Reply #29: Kukadzi 11, 2008, 04:22:36 pm »
Unogona kuwana misoro yakawanda inogona kubatsira kudzidza chiGerman pane ino saiti ... Unogona kutsvaga misoro yaunoda muchikamu chekutsvaga. Nyatsoongorora iyo "german ruzivo base" chikamu paforamu. Iwe uchanyatso kusangana nerakakosha ruzivo nezve grammatics ipapo ... Unogona here kudzidza chiGerman perfekt nekungodzidza misoro iri ino saiti. Hapana munhu anogona kuvimbisa izvi kwauri. Izvo zvine chekuita nekutarisa kwako kubasa rako uye kugona kwako kudzidza ... Asi ini ndinogona kukuudza. Kana iwe ukafunda izvo zvidzidzo pane ino saiti mushe chaizvo, ndinofunga uchaenda kure kure mukudzidza ... Mutauro haugone kudzidzwa nekuverenga nekunyora chete. Usambokanganwa izvi. Teerera kutepfenyuro dzeGerman uye uzive nemutauro uyu. Zano Kubva Kwandiri ...
Yakatorwa kubva: brueder - Kukadzi 11, 2008 na03: 56: 42 pm
Ko kana tikakwanisa kudzidza chiGerman zvizere kana isu tichinzwisisa hunyanzvi hwese hwemutauro wechiGerman pane ino saiti? kana bidet ini handisi kuwana mazita echiito cheGerman uye zvinhu chero munzvimbo. msn yangu haisi pamutemo.tnr-@hotmail.com Ndingafare kwazvo kana ukatumira mazita echiGerman echiito uye zvinhu kukero iri see-mail.Ndinoshamisika kana ndichigona kupa CVP yako, zvingave zvishoma zvakakunakira iwe, asi ini ndakamirira yako CVP
« Reply #30: Kukadzi 11, 2008, 04:57:15 pm »
Yakatorwa kubva: sevval - Kukadzi 11, 2008 na04: 21: 07 pm
Ehe, inodawo hurukuro ... ndinofunga zvingave zvakanaka kuvhura iwo musoro wenyaya ...
« Reply #31: Kukadzi 11, 2008, 05:46:43 pm »
« Reply #32: Kukadzi 11, 2008, 05:51:57 pm »
1 2 3 4 5 6 ... 4481 Enda kumusoro